Friday March 12, 2021 - 22:09:27 in Wararka by Super Admin
Cali Mahdi madaxwaynihii hore ee Soomaaliya
Allah ha u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho janaasada loogu tukaday meydka madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo Arbacdii ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxaa si gaar ah wax looga waydiiyay inay jiraan go'aanno uu qaatay intii uu madaxwaynaha ahaa oo uu imika ka qoomameynayo.
'Waan ka qoomameeyaa'
Waxaa uu sheegay in labadaasi go'aan ay ahaayeen kuwa aan mudnayn in la qaato xilligaasi.
"Labo qodob ayaa jirta waxaan ka shalaayo, qodob waa mid raii'sul wasaaraheygii Cumar Carte Qaalib uu ku dhawaaqay anigana aan ka daba tagin oo ahayd ciidamada ha kala tagaano aad ayaan uga qoomameeyaa," ayuu yiri Mr Cali Mahdi.
Waxaa uu intaa ku daray in go'aankaasi ciidamada lagu kala diray uu ahaa mid khalad ah oo ay haboonayd in ciidamada ay sii joogaan.
"Ma ahayn in amarkaasi la bixiyo taas waan ka qoomameeyaa," ayuu intaa ku daray.
"Waxaan ka qoomameeyaa dagaalkii sokeeye ee xamar ka dhacay ee aan aniga u aqaanno dagaalkii doqomeed ee dhexmaray Mudulood iyo Habargidir waan ka qoomameeyaa aad ayaan uga qoomameeyaa ,"ayuu yiri Mr Cali Mahdi.
'Sanad gudihiis ayaan doorasho ku qaban rabay"
"Waxaa gogol noogu baaqay madaxwaynihii Jabuuti Xasan Guuleed Abtidoon halkaas ayaa la isugu tagay anigu kama qeyb galin Xamar ayaan joogay ka dib halkaas ayaa la igu soo doortay 2 sano,"ayuu yiri.
"Labo sano haddii aniga la igu simi lahaa qorshaheygu wuxuu ahaa in muddo hal sano ah gudaheed inaan doorasho sameeyo xukunkana aan wareejiyo oo aan mar dambe isa soo sharraxin," ayuu yiri Mr Cali Mahdi.
XIGASHADA SAWIRKA,ERIC FEFERBERG VIA GETTY IMAGES Qoraalka sawirka,
Cali Mahdi (midig) iyo Maxamed Faarax Caydiid
Taariikh kooban Cali Mahdi?
Cali Mahdi Maxamed waxa uu xilli lagu qiyaasay 1938-kii ilaa 1939-kii ku dhashay gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya.
Waxbarashadiisii aasaasiga ahayd wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho, isagoo markii dmabena waxbarasho dheeraad ah u tagay dalka Masar.
Intii ay jirtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu xubin ka soo noqday Aqalka Baarlamaanka. Markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1991-kii ayuu noqday madaxweynaha Soomaaliya.
Xilkaas waxa uu hayay intii u dhaxeysay 26-kii bishii January, 1991-kii ilaa 3-dii January, 1997-kii. Mar kale ayaa heshiis ka dhacay magaalada Qaahira loogu cusbooneysiiyay xilka waxaana sanadkii 2000 baddalay Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Intii uu madaxweynaha ahaa waxaa jiray dagaal loo yaqaanno "afar biloodle" oo dhex maray ciidamadiisa iyo xoogag daacad u ahaa Maxamed Faarax Caydiid.